पुरानो नियमका पुस्तकहरू | Word of Truth, Nepal
यस किसिमका पद्य ध्वनिको समानतामा अर्थात् उस्तै सुनिने अर्थात् अनुप्रासयुक्त शब्दमा आधारित हुन्छन्। हिब्रू पद्य ध्वनिको समानतामा खासै आधारित नभई विचारको समानतामा आधारित हुन्छन्। हिब्रू पद्यको रचनामा दुइटा विचारलाई एउटा निश्चित प्रकारले सँगै राखिएको हुन्छ। यसलाई तुलना अथवा समानन्तरता (अङ्ग्रेजीमा “प्यारालालिज्म”, parallelism) भनिन्छ:
“समानन्तरता” भन्ने कुरा बुझ्नलाई दुई समानन्तर रेखाको कल्पना गर्नुहोस्। रेलका लिग समानन्तर हुन्छन्। त्यसका दुई लिग सँगसँगै हुन्छन् र ती समान दुरीमा रहेर अगाडि बढ्दछन्। पुरानो नियमका पद्य पुस्तकहरूमा तीन किसिमका समानन्तरताहरूको प्रयोग भएको भेटिन्छ। तिनलाई एक-एक गरी हामी विचार गरौँ!
अय्यूब – धर्मीजनलाई कष्ट किन हुन्छ?
तब परमप्रभुले “त्यसकहाँ जे-जति छन्, सबै” शैतानको हातमा सुम्पिदिनुभयो (अय्यूब १:११) तर अय्यूबलाई खराबी गर्न वा छुन भने अनुमति दिनुभएन (अय्यूब १:१२)।
यी कुराहरू उसबाट लगिएको खण्डमा अय्यूबले परमेश्वरलाई सराप्नेछन् भन्ने शैतानको दाबी थियो। के शैतानको दाबी सत्य ठहरियो (अय्यूब १:२०-२१)? ____________। के अय्यूबले परमेश्वरका विरुद्ध पाप गरे (अय्यूब १:२२)? _____________। परमेश्वर र शैतानबीच भएको वार्ताको बारेमा के अय्यूबलाई थाहा थियो? ___________। जहाँसम्म अय्यूबलाई थाहा थियो, आफूसँग भएका सब लैजाने व्यक्ति परमेश्वर स्वयम् हुनुहुन्थ्यो (अय्यूब १:२१ – “परमप्रभुले लानुभयो”)! अय्यूबले ठीकै भनेका हुन्! शैतानले यी सबै काम गरे तापनि परमेश्वले नै गर्नुभएको हो भनेर भन्न सकिन्छ! सबै कुरामाथि परमेश्वरको नियन्त्रण छ र शैतानले परमेश्वरको अनुमतिबिना केही गर्न सक्नेथिएनन्।
अध्याय २ को अन्ततिर अय्यूबका तीन मित्रहरू आइपुग्छन् (पद ११-१३)। यी तीन मित्रले अय्यूबलाई सान्त्वना दिने प्रयास गरे तर उनीहरू सफल भएनन्! उनीहरूप्रतिको आफ्नो धारणालाई आय्यूबले यसरी व्यक्त गरे: “तपाईहरू त ________ ________________ का ____________________ दिनेहरू मात्र हुनुहुन्छ” (अय्यूब १६:२)! यी मानिसहरूले अय्यूबसित ठीक कुरा गरेनन्! उनीहरूको भनाइ यस प्रकार थियो: “अय्यूब, तिमीलाई परमेश्वरको दण्ड आइपरेको हो! यो कष्ट आइपर्नुको कारण तिम्रो पाप हो! कष्ट पापकै उपज हो! तिम्रो कष्टले तिमी दुष्ट छौ भन्ने देखाइरहेको छ!”
यसले हामीलाई फेरि अय्यूबको पुस्तकको मूल प्रश्नको बारेमा सोच्न लगाउँछ: “धर्मीजनलाई कष्ट हुँदैन! दुष्टलाई मात्र कष्ट हुन्छ। अय्युबलाई कष्ट छ, तसर्थ ऊ दोषी हुनैपर्छ!”
चाबी पद अय्यूबको पुस्तकको अन्ततिर भेटिन्छ, अय्यूब ४२:५ – “मेरा कानहरूले तपाईका बारेमा सुनेका मात्र थिए, तर अब ता म तपाईंलाई आफ्नै आँखाले _____________”। अय्यूबलाई एउटा अचम्मको अनुभव भयो! उनले अन्तमा परमेश्वरको एक झलक पाए; उनले परमेश्वरलाई उहाँ वास्तवमा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर देख्न पाए! परमेश्वर कति महान् हुनुहुन्छ भनेर उनले अन्तमा देखे।
आखिरमा अय्यूबले यो महसुस गरे: “परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर मैले बल्ल बुझें! म किन कष्ट भोग्दैछु म जान्दिनँ तर यो म जान्दछु कि उहाँ जे गर्दैहुनुहुन्छ परमेश्वर आफै जान्नुहुन्छ र जे सर्वोत्तम छ त्यो परमेश्वर जान्नुहुन्छ। मैले सबै कुरा बुझ्नैपर्छ भन्ने छैन! मेरा परमेश्वरले सब बुझ्नुहुन्छ!” उनका कष्टले अय्यूबलाई परमेश्वरलाई साँचो गरी चिन्न मद्दत गर्‍यो!
तपाईंको जीवनमा पनि तपाईँले बुझ्न नसक्ने कुनै कुराहरू भइरहेका होलान्। तपाईंलाई त्यस्ता कुराहरू भइरहेका होलान् जो तपाईं बुझ्नुहुन्न। सायद तपाईं आत्तिँदै भन्नुहोला, “मलाई किन यस्तो भइरहेछ?” जीवनमा कतिपय कुराहरू ज्यादै कठीन हुन्छन् अनि ती किन हुन्छन् भनेर जान्ने हामीलाई इच्छा हुन्छ। अय्यूबको पुस्तकबाट सिकेको पाठलाई याद गरौं: “किन, म जान्दिनँ तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ। उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर जान्नुहुन्छ अनि मेरो भलाइको निम्ति जुन कुरा सर्वोत्तम छ त्यो परमेश्वर जान्नुहुन्छ! मैले सबै कुरा बुझ्नैपर्छ भन्ने छैन। मेरा परमेश्वर सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ अनि म उहाँमाथि भरोसा राख्नेछु।”
भजनसङ्ग्रह – हिब्रूहरूको उपासनाको पुस्तक तथा गीतमाला
भजनसङ्ग्रहको पुस्तक भेट्टाउन सजिलो छ। बाइबललाई बीचतिर पल्टाउनुहोस् अनि तपाईं सम्भवतः भजनसङ्ग्रहको कुनै भागमा (वा त्यसको नजिकै) पुग्नुहुनेछ। प्रायः भजनहरू दाऊदद्वारा लेखिएका हुन् जसलाई “इस्राएलका _________________ गाउने” (अक्षरश रूपान्तर, “मीठो गीतकार”)। “भजन” (हिब्रू “मिज्मोर”) शब्दको अर्थ हुन्छ, “बाजासहित गाइने कविता”। भजनहरू, गाउनका लागि रचिएका गीतहरू थिए! दाऊद एक निपुण गीतकार थिए। उनले वीणा बाजाका साथ यी गीतहरू गाउने गर्थे (१ शमूएल १६:१६,१८,२३)। अधिकांश भजनहरू दाऊदले लेखेका हुन् तर गीतकार उनी मात्र थिएनन्। भजनसङ्ग्रह ९० कसले लेखेका हुन् (आफ्नो बाइबलमा “भजनसङ्ग्रह ९०” को मुनि हेर्नुहोस्)? ____________। भजनसङ्ग्रह ७२ कसले लेखेका हुन्? _______________। भजनसङ्ग्रह ७३? ________________
भजनसङ्ग्रहमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण पदहरू छन् त्यसैले एउटै चाबी पद छनोट गर्न गाह्रै पर्छ (तपाईंले सायद प्रत्येक भजनैपिच्छे एउटा-एउटा चाबी पद भेट्टाउन सक्नुहुन्छ)। तर भजनसङ्ग्रहको विषय प्रशंसा भएको हुनाले भजनसङ्ग्रहको आखिरी पद (भजनसङ्ग्रह १५०:६) लाई चाबी पदको रूपमा छनोट गर्नु सुहाउँदो होला: “सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। हल्लेलुयाह!” आफ्ना सृष्टिले उहाँको प्रशंसा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ! भजनसङ्ग्रह प्रशंसा (अर्थात् उहाँलाई उहाँको महानताको श्रेय दिने काम र अरूहरूलाई उहाँको महानताको वर्णन गर्ने काम!) ले भरपूर छ।
हिब्रू वर्णमालामा २२ ओटा वर्णहरू छन्। वर्णाक्रमिक भजनमा पहिलो पद वर्णमालाको पहिलो वर्णबाट शुरु हुन्छ अनि दोस्रो पद दोस्रो वर्णबाट शुरु हुन्छ अनि यसरी नै क्रमैसित अगाडि बढ्दै अन्तिम पद आखिरी वर्णबाट शुरु हुन्छ। नेपालीमा वर्णाक्रमिक भजन लेख्ने हो भने हामीले “क” बाट पहिलो पङ्‍‍‍क्ति, “ख” बाट दोस्रो पङ्‍‍‍क्ति, गर्दै क्रमशः अन्तमा “_____” बाट कविताको अन्तिम पङ्‍‍‍क्ति रच्नुपर्ने हुन्छ।
“हल्लेलुयाह” एउटा हिब्रू शब्द हो जसको अर्थ हो “परमप्रभुको प्रशंसा गर”। प्रत्येक हल्लेलुयाह भजन “हल्लेलुयाह” मा अन्त हुन्छ। बाइबलको सबभन्दा छोटो भजन (भजनसङ्ग्रह ११७) एक हल्लेलुयाह भजन हो। तपाईँले अरू पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ कि?
भजनसङ्ग्रह १५० (मात्र ६ ओटा पदहरू) मा “प्रशंसा” भन्ने शब्द कतिपटक भेटिन्छ? _____________
“पश्चात्ताप” को अर्थ हो “गल्ती गरेकोमा दुःखित हुनु र पाप स्वीकार गरी परमेश्वरमा फर्की गल्तीलाई सच्याउन राजी हुनु”। कतिपय भजन परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका मानिसका प्रार्थना हुन्। जस्तै, भजनसङ्ग्रह ५१ आफू ठूलो पापमा फसेपछि दाऊदले गरेको प्रार्थना हो। कुन पद (वा पदहरू) ले दाऊदले आफ्नो पाप स्वीकार गरेको देखाउँछ? __________________। हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर यी भजनहरूले हामीलाई सिकाउँछन्।
सरापको अर्थ हो “कसैमाथि खराबी आओस् भनी प्रार्थना गर्नु”। कुनै-कुनै भजनले हामीलाई पापीका विरुद्धमा रहेको परमेश्वरको पवित्र क्रोधको र दुष्टलाई उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ र नष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको सम्झना गराउँछन्। यीमध्ये एउटा हो भजनसङ्ग्रह ५८। हेर्नुहोस्, दुष्टहरूलाई उल्लेख गर्दा र उनीहरूलाई उनीहरूको पापको कारण कस्तो कारवाही गर्नुभएको होस् भनी प्रार्थना गर्दा दाऊदले कति कडा शब्द प्रयोग गरेका छन्।
यी हुन् मसीह, प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउने भजनहरू। भजनहरूले उहाँका विषयमा बताउँछन् भनी येशू आफैले भन्नुभएको थियो (हेर्नू: लूका २४:४४ – “___________का पुस्तकहरूमा मेरो विषयमा जे लेखिएका थिए”)। हामीले ख्रीष्टलाई भेट्टाउने प्रतीक्षा गर्दै भजनहरूलाई पढ्नुपर्दछ।
भजनसङ्ग्रह हृदयको पुस्तक हो। भजनसङ्ग्रह ६२:८ मा भजनको लेखकले हामीलाई “_________को सामुन्ने आफ्ना ___________ खोल” (हिब्रूमा “खोल” = पोखाओ”) भनी आग्रह गर्दछन्। दाऊद र अन्य लेखकहरूले भजनसङ्ग्रहमा यस्तै गरेको हामी पाउँछौं। यी मानिसहरू परमेश्वरका सामु एकदम खुल्ला थिए। दुःखित हुँदा होस् वा निराश हुँदा होस् वा उनीहरूलाई डर लाग्दा उनीहरू आफ्ना मनका भावना परमेश्वरलाई व्यक्त गर्थे। ४२:५-६ मा भजन लेखकको भावना कस्तो थियो? ____________________________________। खुशी वा आनन्दित हुँदा भजन लेखकले आफ्नो भावना परमेश्वर लगायत सबैलाई थाहा दिए। पाप गरेपछि दाऊदले आफ्नो हृदय परमेश्वरलाई पोखाए अनि मन खोलेर आफूले गरेका पाप स्वीकार गरे (भजनसङ्ग्रह ५१:३-४)। भजनसङ्ग्रहमा हामी मानिसहरूको भित्री हृदयदेखिको उद्‍गारहरू पढ्छौं। दुःखमा वा शोकमा वा ठूलो आनन्द र रमाहटको घडीमा, भजनसङ्ग्रहमा परमेश्वरका जनहरूले आफ्ना हृदयहरू उहाँका सामु पोखाइरहेका देख्छौं।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 14:23:042020-04-28 14:35:01अय्यूब र भजनसङ्ग्रह
एज्रा, नहेम्याह र एस्तरका पुस्तक पुरानो नियमका ऐतिहासिक पुस्तकहरूमध्ये आखिरी तीन पुस्तक हुन्। यहूदीहरूलाई बेबिलोनी कैद (Babylonian Captivity) पछि आइपरेका कुराका वृत्तान्त नै यी पुस्तकका मूल विषयवस्तु हुन् (यस अध्ययनमालाको पहिलो अध्यायमा “निर्माण” उपशीर्षकमुनि हेर्नुहोस्)।
बेबिलोनी कैद ७० वर्ष लामो थियो। सिङ्गो यहूदा राज्यलाई बेबिलोन देशमा लगिएको थियो जसलाई “दक्षिणको कैद” (Southern Captivity) पनि भनिन्छ। के यति टाढो परदेशमा रहनुपर्दा यहूदीहरू खुशी थिए (भजनसङ्ग्रह १३७:१-४)? _______। तिनीहरूले आफ्नो मातृभूमि र आफ्नो प्रिय शहर यरूशलेमलाई बिर्सन सकेनन् (भजनसङ्ग्रह १३७:५)। बेबिलोनमा रहेका दानिएल एक यहूदी आफ्ना परमेश्वरलाई दिनहुँ तीतीन पटक प्रार्थना गर्थे। उनी कतातिर फर्केर प्रार्थना गर्थे (दानिएल ६:१०)? __________________
यरुबाबेलसित कतिजना यहूदीहरू फर्के? यसको जवाफ एज्रा २:६४-६५ मा पाइन्छ। दासहरूलाई समेत गनेर आफ्ना पितापूर्खाहरूको देशमा फर्कने यहूदीहरू करिब ५०,००० मात्र थिए। यो ज्यादै थोरै हो! यो सानो समूहलाई बाइबलमा “बचेकाहरू” (remnant) भनेर जनाइएको छ। बेबिलोन तथा अन्य राष्ट्रमा बसोबास गरिरहेका धेरैजसो यहूदीहरू आरामदायी घरहरूमा बस्दै आएका थिए अनि उनीहरू जहाँ थिए त्यहीँ नै बसिरहन चाहन्थे। तर केही यहूदीका हृदयमा भने उनीहरूले परमेश्वरबाट पाएका भूमिप्रति माया थियो; तिनीहरू फर्क चाहन्थे। कोरेसबाट अनुमित पाउनेबित्तिकै तिनीहरू जानलाई तयार भइहाले (हेर्नुहोस् एज्रा १:१-३)।
कोरेस महान् (ई. पू. ५५०-५३०) – इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिन एकजना राजाको उदय हुनेछ भनेर यशैयाले धेरै अघिबाटै भविष्यवाणी गरेका राजा यिनै थिए (यशैया ४४:२८; ४५:१-५)। उनले बेबिलोनी सेनालाई परास्त गरे र यहूदीहरूलाई आफ्नो मातृभूमिमा फर्केर उनीहरूको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नलाई अनुमति दिए (एज्रा अ य १)। कोरेसको राज्यकालसम्म दानिएल जीवितै थिए (दानिएल १:२१; १०:१)।
दारा महान् (ई. पू. ५२२- ४८६) – यिनले मन्दिरको निर्माण कार्य कुनै पनि विध्नबाधाबिना पूरा गरियोस् भन्ने उर्दी निकाले (एज्रा अध्याय ६)। यिनैको राज्यकालमा मन्दिरको निर्माण कार्य सम्पन्न पनि भयो (एज्रा अध्याय ६)। टिप्पणी: दानिएलमा उल्लेख भएका मादी दारा (हेर्नू: दानिएल ५:३१, ६:१) र यस राजाका बीच अलमल नहोस्। मादी दाराचाहिँ कोरेस महानका खटनमा बेबिलोनका राज्यपाल भएका थिए।
अहासूरस वा जर्क्सीस् (ई. पू. ४८६-४६४) – एस्तरको पुस्तकमा उल्लेखित राजा यिनै थिए। एस्तर उनकी रानी बनिन्। यिनी एज्रा ४:६ मा पनि उल्लेख गरिएका छन्।
यस खण्डको चाबी पद: एज्रा ५:५ – “तर यहूदी धर्म-गुरुहरूमाथि परमेश्वरको निगाह भएकोले…[मन्दिर निर्माणको] काम गरिरहनबाट तिनीहरूलाई कसैले रोक्न सकेन।” (टिप्पणी: यहाँ “निगाह” भनेर अनुवाद गरिएको हिब्रू शब्द (आयिन्) को अक्षरशः रुपान्तर हो: “आँखा”।) परमेश्वरको आँखा अर्थात् उहाँको कृपादृष्टि आफ्ना जनहरूमाथि रहेको थियो। परमेश्वर आफ्ना जनहरूको पक्षमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो।
अर्को चाबी पद: एज्रा १:५ – “त्यसपछि यरूशलेममा परमप्रभुको भवन (मन्दिर) को ______________ गर्न परमेश्वरले _______________ पार्नुभएका यहूदा र बेन्यामीनका परिवारका मुख्य मानिसहरू अनि पूजाहारीहरू र लेवीहरू सबै नै जानलाई तयार भए।” परमेश्वरले यी मानिसका हृदयमा काम गर्नुभयो! उहाँले उनीहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो, मन्दिर निर्माण गर्ने इच्छा दिनुभयो। परमेश्वरको कृपादृष्टिमा आफ्ना जनहरूमाथि रहेको थियो! स्मरण होस्, आफ्नो देशमा फर्की आएका यहूदीहरूको सङ्ख्या ठूलो थिएन। उनीहरू शक्तिशाली सेनाको रूपमा पक्कै पनि थिएनन्। त्यहाँ उनीहरू अरू जातिहरूले घेरिएका थिए, शत्रुहरू चारैतिर थिए। यी शत्रुका बारेमा हामी एज्रा ४-५ मा पढ्छौँ। यी शत्रुले यहूदीहरूलाई मन्दिर निर्माण गर्नदेखि रोक्नलाई भ्याएसम्म प्रयास गरे। यी शत्रु सफल भए कि भएनन्? के यहूदीहरूले परमेश्वरको भवन निर्माणको काम पूरा गरे (एज्रा ६:१५)? __________। परमेश्वरको कृपादृष्टि आफ्ना जनहरूमाथि हुनु नै यहूदीहरूको सफलताको रहस्य थियो। उनीहरूको देखरेख गर्न र उनीहरूलाई रक्षा गर्न यहूदीका पक्षमा महान् परमेश्वर स्वयम् हुनुहुन्थ्यो! यहूदीका परमेश्वरका सामु यहूदीका शत्रुका कुनै सीप चलेन!
तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने निश्चय हुनुहोस्, परमेश्वरको आँखा तपाईँमाथि छ! १ पत्रुस २:२५ मा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हाम्रा _____________का ___________ र _____________ भनिएको छ। गोठालाको काम आफ्नो भेडाको देखरेख गर्नु हो। “अध्यक्ष” को अर्थ हो “देखरेख गर्ने, हेरविचार गर्न”। हाम्रो वास्ता गर्ने एक महान् गोठाला हुनुहुन्छ! के संसारमा छँदा विश्वासीले शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ? के हाम्रा परमेश्वर यी शत्रुभन्दा महान् हुनुहुन्छ? हामीले परमेश्वरलाई देख्न सक्तैनौ तर पनि हामी ढुक्क रहन सक्छौँ कि उहाँले हामीलाई देख्नुहुन्छ! हरेक विश्वासीले उत्पत्ति १६:१३ मा हागारले भनेजस्तै भन्न सक्नुपर्छ: “मलाई ____________ परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ।”
के आफ्नो जाति यहूदीका निम्ति परमेश्वरको सक्रिय वास्ता थियो? अवश्य थियो! यस पुस्तकमा परमेश्वरको नाम कतै भेटिँदैन तरैपनि परमेश्वरको सक्रिय हात भने शुरुदेखि अन्तसम्मै देखिन्छ! कतिपल्ट परमेश्वर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न अदृश्य ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ! कतिको नजरमा परमेश्वर केही नगरी बस्नुभएको जस्तो देखिएला तरैपनि आत्मिक जनले स्पष्टै जान्दछ, परमेश्वर “____________ ________ ___________ ________ __________ सल्लाह मुताबिक” (एफेसी १:११) काम गर्दै, नियन्त्रण गर्दै, चलाउँदै हुनुहुन्छ। नबुकदनेसरले समेत एकपल्ट यो पाठ सिक्नुपर्‍यो, परमेश्वर सिंहासनमै विराजमान हुनुहुन्छ (दानिएल ४:३३-३७)। उहाँ “_______________का सबै राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ” (२ इतिहास २०:६), फारसको राज्यमाथि पनि! परमेश्वर ___________को सिंहासनमा बस्नुहुन्छ (भजनसङ्ग्रह १०३:१९)। के उहाँले तपाईँको हृदयको सिंहासनमा आफ्नो स्थान पाउनुभएको छ?
यस पुस्तकमा परमेश्वरको मात्र होइन शैतानको नाउँ पनि कतै भेटिँदैन। एस्तरको पुस्तकमा शैतानको नाउँ कतै नभेटिए तापनि, उसको दुष्ट हातले काम गरिरहेको भने पाउँछौँ। शैतानले “पर्दाको पछाडिबाट” सक्रियरूपमा आफ्नो हतियार हामानको माध्यमद्वारा परमेश्वरका जनहरूलाई नष्ट गर्न खोजिरहेको देख्छौँ।
ठीक त्यतिबेला परमेश्वरले आफ्नो उदेकको काम थाल्नुभयो। त्यहाँ एउटा घटना घट्यो जसले इतिहासलाई नै मोड्यो र यहूदी राष्ट्र बचाइन सम्भव भयो। उक्त घटना कुन थियो? त्यो हामी एस्तर ६:१ मा पढ्छौँ – राजा निदाउन सकेनन्! एक रातको कुरा हो, राजालाई निदाउन गाह्रो पर्‍यो अनि उनी निदाउन नसकेकाले त्यहाँ त्यस्ता केही कुराहरू यस्तो प्रकारले हुन गए कि दुष्ट हामान विफल भए र यहूदी राष्ट्र बचाइए। परमेश्वर यति महान् हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा राजाको निद्रारहित रातलाई समेत प्रयोग गर्नुभई आफ्नो सिद्ध योजनालाई पूरा गराउन सक्नुहुन्छ! उक्त रात राजा निदाउन नसक्नु कुनै संजोगको कुरा थिएन!
यहूदीहरूको “भाग्य” बलियो रहेछ भनी हामी नभनौँ। होइन, परमेश्वरले आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनौठो र रहस्यमय ढङ्गले आफ्नो योजनालाई पूरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो! एस्तर एउटा यस्तो पुस्तक हो जसमा परमेश्वरको नाम कतै भेटिँदैन तर उहाँको हात भने जहाँतहीँ देखिन्छ! अनि यही परमेश्वर आज पनि आफ्नो योजनालाई पूरा गर्दै हुनुहुन्छ!
एस्तरको चाबी पद: एस्तर ४:१४ (पदको आखिरी भाग)-“शायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो ____________ मा पुगेकी हौ कि?” यहाँ यहूदी मोर्दकै एस्तरसित कुरा गर्दै थिए। रानी भएकीले राजाकहाँ गएर उनले कुरा गरी यहूदी राष्ट्रलाई बचाउन शायद सक्नेछिन् कि भन्ने आशा मोर्दकैले राखेका थिए। यस पदमा मोर्दकैले उक्त परिस्थितिमा परमेश्वकरको हात रहेको कुरा महसुस गरेको देखिन्छ। परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई छुटाउनुहुनेछ भनी उनी निश्चित थिए। अनि आफ्नो अन्तस्करणमा मोर्दकै जान्दथे, एस्तर रानी हुनु कुनै संजोगको कुरा होइन भनेर (उनी कसरी रानी बन्न पुगिन् भन्ने कुरा एस्तर अध्याय १-२ मा बताइएको छ)। त्यो “भाग्य” को सवाल थिएन। “यस्तै समयको निम्ति” उनी रानी बन्नु परमेश्वरकै योजना थियो। उक्त समयमा एस्तर रानी बन्न पुग्नु भनेको आफ्ना जातिका निम्ति परमेश्वरको योजनाभित्रकै कुरा हुनुपर्छ भनी मोर्दकै निश्चित थिए। अनि एस्तरको पुस्तक पढ्दै जाने क्रममा हामी मोर्दकैको धारणा एकदम ठीक भएको पाउँछौँ। ठीक समयमा ठीक कुरा बोल्नलाई ठीक ठाउँमा ठीक व्यक्ति हुनलाई परमेश्वरले एस्तरलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो!
यस खण्डको चाबी पद: एज्रा ८:२२ (पदको अन्तिम भाग) – “उहाँलाई ___________ सबैमाथि हाम्रा परमेश्वरको ____________ रहन्छ, तर उहाँलाई ______________ सबैमाथि उहाँको भयङ्कर क्रोध पर्छ।” (टिप्पणी: यहाँ “निगाह” भनेर अनुवाद गरिएको हिब्रू शब्द (याद्) को अक्षरश: रूपान्तर हो: “हात”।) उहाँलाई खोज्नेहरूले आफूअरूमाथि परमेश्वरको आशिषको हात रहेको पाउनेछन्! उहाँलाई खोज्नेहरू उहाँलाई खोजेकोमा कहिल्यै पछुताउनेछैनन्! उहाँलाई त्याग्नेहरू र उहाँदेखि तर्केर जानेहरू ठूलो सङ्कटमा पर्नेछन्! यही कुरा हामीले अर्को चाबी पद १ शमूएल २:३० मा पनि पाएका थियौं (अध्याय ४ मा हेर्नुहोस्)। उहाँलाई आदर गर्नेहरूलाई परमेश्वर आदर गर्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई आदर नगर्नेहरूले कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ!
एज्रा अध्याय ७-८ मा “परमेश्वरको हात हामीमाथि थियो” भन्ने वा यस्तै वाक्यांश ६ पटक दोहोरिएको पाइन्छ! यी पदहरू भेट्टाउनुहोस्: _______________________________________। उहाँलाई खोज्नेहरूमाथि परमेश्वरको कृपालु हात रहन्छ! यो एज्राको समयमा साँचो थियो र आज पनि साँचो नै छ।
एज्रा अध्याय ९-१० मा “परमेश्वरको हात हामीमाथि थियो” भन्ने वाक्यांश पढ्न पाइँदैन। एज्रा ७-८ मा पटकपटक दोहोरिएको वाक्यांश पुस्तकका अन्तिम दुई अध्यायमा नपाइनुको कारण के हो? अन्तिम दुई अध्यायले इस्राएलीहरू ठूलो पापमा फसेका कुरा बताउँदछ। धेरै पुरुषले परमेश्वरको आज्ञा (व्यवस्था ७:१-४) लाई उल्लङ्घन गरी अन्यजाति स्त्रीहरूसित विवाह गरे। जतिबेला मानिसहरू प्रभुलाई परित्याग गर्छन् र उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छन्, त्यतिबेला परमेश्वरले आफ्नो आशिषको अनुग्रहमय हातलाई पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ।
नहेम्याहको पुस्तकको चाबी: नहेम्याह ६:३ – “यसैकारण मैले यस्तो जवाफ दिएर समाचार पठाएँ ‘अहिले मेरो हातमा __________ ______________ छ। म त्यहाँ आउन सक्दिनँ। काम छोडी तिमीहरूकहाँ आएर यो काम किन रोकिने?” (टिप्पणी: अक्षरश: रूपान्तर => “म एउटा महान् काम गर्दैछु…”)। उनले आफ्ना काम छोडी उनीहरूसित भेट्न गाउँमा ओर्लेर आओस् भन्ने कुरा नहेम्याहका शत्रुहरूले चाहिरहेका थिए (नहेम्याह ६:२)। योचाहिँ नहेम्याहलाई नाश गर्नलाई रचिएको धूर्त षड्यन्त्र थियो (नहेम्याह ६:२)। नहेम्याह आफू एउटा महान् काममा लागिरहेको छु भन्ने कुरा जान्दथे अनि परमेश्वरको त्यो कामबाट उनी कुनै हालतले पनि बिथोलिन चाहँदैनथे! कसैले नहेम्याहलाई रोक्नेवाला थिएन, न कुनै कुरा न कोही व्यक्ति न शैतानले नै! के विश्वासी जन कुनै कुराले परमेश्वरको काम गर्नदेखि रोकिनुहुन्छ (१ कोरिन्थी १५:५८)? ______________
परमेश्वरको काम गर्न नहेम्याह सफल भए। उनको सफलताको रहस्य के थियो? रहस्य यति थियो: प्रार्थना! नहेम्याह प्रार्थनामा बलिया थिए! नहेम्याहको अर्को चाबी पद हो, नहेम्याह १:४- “यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ। म केही दिनसम्म विलाप गर्दैरहेँ, र उपवास बसेँ अनि स्वर्गका _____________सित ____________ गरेँ।” यरूशलेमका पर्खालहरू भत्केका छन् भन्ने खबर उनको कानमा पुगेपछि नहेम्याहले उक्त विषयलाई आफ्नो परमेश्वरका सामु प्रार्थनामा ल्याए। नहेम्याहको पुस्तक पढ्दै जाँदा परमेश्वरले उनको प्रार्थनालाई अचम्म प्रकारले जवाफ दिनुभएको देख्छौँ र साथै पर्खालहरू निर्माण गर्ने महान् काममा मानिसहरूलाई नेतृत्व गर्नलाई परमेश्वरले नहेम्याहलाई नै प्रयोग गर्नुभएको देख्छौँ।
आज परमेश्वरका जनहरूले प्रार्थना र परमेश्वरको वचनको महत्त्वलाई महसुस गर्नुपर्छ (प्रेरित ६:४)! प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरसित कुरा गर्नु र बाइबल पठनद्वारा परमेश्वरलाई तपाईँसित कुरा गर्न दिनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा अरू कुनै छैन। एज्रा ९:४ र १०:३ मा हामी देख्छौँ, ती यहूदीहरू परमेश्वरको वचनहरूदेखि “डराए” (trembled, थरथर काँपे)। परमेश्वरको वचनप्रति एज्रा लगायत ती मानिसहरूको धारण कस्तो रहेछ? के तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई हल्का प्रकारले लिएका थिए? के तपाईँ नहेम्याहजस्तै प्रार्थनामय जीवन बिताउने मानिस हुनुहुन्छ? के तपाईँ एज्राजस्तै परमेश्वरको वचनमा लिप्त मानिस हुनुहुन्छ?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 14:12:432020-04-28 14:35:01एज्रा, नहेम्याह र एस्तर